Ku xir xirmooyinka SSH adoon sirta ku jirin kaliya 3 talaabo | Laga soo bilaabo Linux
Samee xiriirada SSH adigoon ereyga sirta ah kaliya aheyn 3 talaabo
Halkan waxaad ku arki doontaa sida loogu xiro kombiyuutarka fog SSH Kaliya galitaanka erayga sirta ah markii ugu horeysay, markaa xitaa haddii aan dib u bilawno labada kumbuyuutar, dib looma weydiin doono lambarka sirta ah markale.
Laakiin, aan marka hore aragno sharaxaad kooban oo ku saabsan waxa ay tahay SSH:
SSH waa hab maamuus, hab isgaarsiineed oo ka dhexeeya laba kumbuyuutar. Waxay noo ogolaaneysaa inaan maamulno koox fog. Markaan kumbuyuutar kale ka galno dhanka SSH, amarka aan galno terminalkaas waxaa lagu fulin doonaa kombuyuutarka kale, sidan ayaan u maamulnaa / u maamuli doonnaa.
Wax kasta oo lagu kala qaado SSH, waa la keydiyay oo leh nabadgelyo aad u wanaagsan.
Hadda, waxaan arki doonaa sida seddex tallaabo oo kaliya aan u qaabeyn doonno PC # 1 si aad u hesho PC # 2 adoon galin sirta:
Waxaan haynaa xaalada soo socota:
PC # 1 - » Waxaad rabtaa inaad ku xirmaan PC # 2, adigoon galin lambarka sirta ah markasta oo aad isku daydo inaad ku xirto PC-gaan kale.
PC # 2 - » Waxaad haysaa adeegaha SSH. Kani waa midka PC # 1 wuu xirmi doonaa, wuuna sameyn doonaa asagoon galin sirta. PC-gaan waxaa ku jira isticmaale la yiraahdo xidid.
1. En PC # 1 waxaan u qornaa waxyaabaha soo socda:
Tani waxay abuuri doontaa fure dadweynaha. Si aanan ugu jahwareerin "furayaasha guud iyo kuwa gaarka ah", si fudud ayaan u sharaxi doonaa.
Ka soo qaad in aad laba furaha gurigaaga ku haysato jeebkaaga, mid aad siiso saaxiibtiis tan iyo markii aad wada nooshihiin, midda kalena keligaa ayaa lagaa tagayaa, cidna ma siisid. Hagaag, furahaas aad siisay saaxiibtiis ayaa u oggolaan doonta inay soo gasho gurigaaga adigoon kuu sheegin, adigoon weydiisan rukhsaddaada, sax? taasi waa fure guud, "fure" oo u ogolaanaya hal kombiyuutar inuu galo mid kale isagoon weydiisan ogolaanshahaaga (taasi waa, adigoon galin magaca isticmaalaha + furaha)
Markay amarkaas dhigayaan, ayaa soo bixi doona:
2. Kaliya riix [Gali], ilbiriqsi kadib ayaan markale riixnaa [Gali], iyo ilbiriqsi ka dib waxaan mar kale riixnaa [Gali]. Waxaan ula jeedaa, waanu cadaadin lahayn [Gali] wadar ahaan seddex (3) jeer, kaliya waan cadaadinaa ... waxba ma qorno 🙂
Markaan sidan yeelno, wax aad ugu eg kuwa soo socda ayaa soo muuqan doona:
Diyaar, waanu haysanay furihii guud ... hada waxaan ubaahanahay inaan siino cidkasta oo aan dooneyno (tusaale tusaalaha, sii saaxiibteena haha)
Waxaan rabno waa taas PC # 1 ku xir PC # 2, horeyba ugu jiray PC # 1 dhammaanteen kor ayaan ku qabannay, gudaha PC # 2 Waxba kama qaban. Wanaagsan, PC # 2 wuxuu leeyahay cinwaan IP ah tusaale ahaan 10.10.0.5.
3. Waan gelinay PC # 1 soo socda:
Waxa ay tani qabato ayaa si fudud ku siinaya furaha dadweynaha PC # 1 a PC # 2, taasi waa, waxay siinaysaa PC # 2 fure dadweynaha PC # 1halka PC # 1 wuxuu hayaa furehiisa gaarka ah, waad ogtahay; furahaas aan cidna la siinin. Waa muhiim inaadan khaladaad kula sameyn isticmaaleha, taasi waa, haddii isticmaaleha “xidid"Ma jiraan wax ku jira PC # 2 ayaa na siin doona qalad, waxaa muhiim ah in la caddeeyo nooca isticmaale ee aan u adeegsan doonno tan, marka lagu daro xaqiiqda ah in adeegsadahaas aan ku habeynayno gelitaanka bilaa lambarka sirta ah, uu la mid noqon doono kan aan ku heli doonno mustaqbalka. Marka tan la sameeyo waa inay u egtahay sidan:
Tallaabada hore, waa inay ku ridaan lambarka sirta isticmaalaha PC # 2.
Iyo voila ... wax walba waa la qaabeeyey ????
Sidoo kale waxay noogu muuqataa terminal-ka, aan tijaabino haddii wax walba runti ay shaqeeyeen 100% OK. Si loo tijaabiyo, waxaan dhignaa:
Hadday rabaan inay galaan kombuyuutar kale iyagoon had iyo jeer galin lambar sir ah (PC # 3 tusaale ahaan), waxaan si fudud u siineynaa furaheena guud waana taas, taasi waa, markii aan tallaabada qaadnay #1 y #2 maahan inaan sii sameyno mar dambe. Haddii aan rabno inaan marinno PC # 3 tusaale ahaan, kaas oo leh IP 10.10.99.156 waxaan kaliya saaray:
Ilaa hadda casharka.
Sharax in heerka amniga marka aan ka hadlayno SSH uu aad u sarreeyo, sarbeebta aan ku sharaxay tallaabooyinka qaarkood (ee ah in furaha la siiyo saaxiibteena) waxaa laga yaabaa inaysan ahayn haha ​​ugu habboon, maaddaama saaxiibteena ay siin karto furaha qof kale. Markii aan ka hadlayno SSH, mabaadi'da amniga way fududahay in la sharaxo, markaan isku dayeyno inaan marinno kombuyuutarkeena (PC # 1) hubiyaa haddii kumbuyuutarka kumbuyuutarka uu ku jiro # 2 waxaa jira fure dadweyne ee kumbuyuutarkeenna (xaaladdan waxaa jira, maxaa yeelay waxaan u qaabeynaa habkaas), markaa, haddii ay jirto mid, way fududahay, hubi haddii fureha guud uu isku mid yahay furahayada gaarka ah (midka cidna maanaan siin). Haddii furayaashu isku mid yihiin waxay noo ogolaaneysaa inaan marinno, haddii kale iyo tallaabo xagga amniga ah, nama ogolaanayo inaan meel fog ka galno kombuyuutarka kale.
Marka hadda waad ogtahay ... siinta saaxiibteena furaha guriga maahan waxa ugu badbaado badan, laakiin wadaaga furayaasha iyo helitaanka kombiyuutar kale meel fog oo ah SSH waa amaan ^ _ ^
Shaki ama su'aalo, cabashooyin ama talo soo jeedin ha la socodsiiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Samee xiriirada SSH adigoon ereyga sirta ah kaliya aheyn 3 talaabo
Xaqiiqdii ma fahmin sida aad uga khaldan tahay amniga aad qalad noocan ah u sameyso. Haddii tallaabada halka ay ku qoran tahay:
Waxba ma qori karno, waan lumnay haddii isticmaale u suurtagaliyo inuu galo kombuyuutarkeena oo furo terminal, maadaama ay si otomaatig ah u fuliso:
Waxay geli doontaa iyada oo aan la weydiinin lambar sir ah.
Haddii qof uu helo helitaanka laptop-kayga, haa, waxay marin u heli karaan PC # 2 iyadoon loo galin erayga sirta ah, si kastaba ha noqotee, sidaad u leedahay, waan ka xumahay amniga, runti ma waxaad u malaynaysaa in helitaanka kombuyutarkayga ay tahay wax si fudud? HAHA.
Markaan marwalba kaco, marwalba shaashadda waan xiraa, hadii kale 30 sekan kadib wax hawl ah kumajiraan jiirka ama kumbuyuutarka, wali wuu xirayaa
Haddii qof xado laptop-kaaga, si kasta oo kalfadhiga loo xannibo, helitaanka gelitaanka feylasha waa wax aan muhiim ahayn, waa 5 daqiiqo oo Linux ah oo USB-ga ka furan kara. Oo markii faylasha la helo, maadaama furaha khaaska ah aan la ilaalin, waxaad u isticmaali kartaa si toos ah, ama si fiican u nuqul ka sameysan kartaa kana heli kartaa mid ka mid ah server-yadaada si raaxo leh gurigaaga. Dhab ahaantii, hawshu waa mid aad u dhakhso badan oo xitaa aadan u baahnayn inaad ogaato. 5 daqiiqo gudahood waxaad aadeysaa musqusha ama wax kasta, wax walba waa lagu sameyn karaa.
Habka aaminka ahi waa in furaha sirta la dhigo furaha khaaska ah, ka dibna la isticmaalo ssh-agent si ay u xasuusato lambarka sirta ah ee kulanka oo dhan (ssh-add uun). Sidan oo kale, waxay kaliya codsan laheyd lambarka sirta ah markii ugu horeysay, ficil ahaan waxaad lahaan laheyd xiriir aan laheyn lambarka sirta ah 90% waqtiga, marka lagu daro in lagaa ilaaliyo tuugada ama ku soo xadgudubka.
Ma wax yar baa in la helo feylasha? Weligaa miyaad maqashay dhuumasho dhan oo disk ah? (luks + cryptsetup)
Haa, dabcan, haddii aad haysatid diskka oo dhan oo la qariyey waa sheeko kale, laakiin 90% dadka isticmaala ma sameeyaan sababtoo ah ma yaqaanaan sida loo sameeyo kiisas badanna xitaa ma magdhabaan. Taa bedelkeeda, ma keydin kartid furaha sirta ah ee aan la qarin ama furayaasha gaarka loo leeyahay ee aan la ilaalin karin ee diskka waa wax qof walba uu sameyn karo, iyo dhaqan wanaagsan guud ahaan.
Kaydinta furayaasha khaaska ah ee sirta ah ee la duubay waxay la mid tahay dhigashada gaarigaaga oo aad ka tagto albaabada furan, laakiin inaad shaqaaleeysid ilaaliye waardiye ah si aad u ilaaliso. Way shaqaysaa, haa, laakiin way fududahay oo waxtar badan tahay in si toos ah loo xidho.
MMm wax badan kuma qabato boodboodka, in kasta oo ay abuuri karaan is dhexgal farsameed, u xilsaaraan IP kuna xirmaan IP-gaas dal-ku-galka ah, sidaa darteed xitaa haddii ay furaha ka saaraan ma awoodi doonaan inay helaan mashiinka maxaa yeelay furaha wuxuu u shaqeeyaa IP gaar ah. Waxay sidoo kale kuxirantahay waxay rabaan, sifiican ayey iigu shaqeysaa aniga sida asxaabtu ii sharraxeyso, waxaan ku leeyahay gurigeygu adeege khaas ah uma baahni inaan amniga kordhiyo maxaa yeelay wuxuu leeyahay VPN habeysan.
Miyayna kuwan oo dhami khuseyn karaan terminal-ka daaqadaha ee ay tahay inuu ku xirmo * NIXs badan?
Waxaan leeyahay putty laakiin waxaan sidoo kale isticmaali karaa Securecrt (hada waxaan haystaa qoraal)
In Windows terminal ah (cmd) Waxaan ku qanacsanahay in maya, halkaas ka suurtoobi maayo.
Si kastaba ha noqotee haddii aad isticmaasho Putty waad isku dayi kartaa, way shaqeyn kartaa.
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow bartayada 😀
Putty wuxuu horey u aqbalay cabirka -pw amarrada dheeraadka ah. (tusaale: -pw12345)
Xaqiiqdii, Super Putty waa ka qabow yahay kaliya Putty caadi ah. (Waa jir u ah Putty)
Marka uma baahnid inaad dhigeyso.
Ku jawaab erm3nda
Waad ku mahadsantahay qoraalka, aad u faa'iido badan. Waa waxoogaa caajis ah inaad gasho SSH wax walba.
Ku jawaab Higi
Waad salaaman tihiin aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin booqashadaada iyo faallooyinkaaga 🙂
Majiro wax saaxiib ah, farxad ah inaan ogaado inay waxtar laheyd ... haddii aan kaa caawin karno si kale, waxaan aad ugu faraxsanahay 😉
Waxaan u baahanahay inaan ku xirnaado windonws pc kana mid ah Linux-kayga sida aan uga sameeyo terminalkeyga
Wanaagsan .. runtii waxay dhiirigelin u tahay inaan arko casharradan noocan ah, waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan sidoo kale ku biiriyo waayo-aragnimadayda markii hore la fududeeyay si bulshada ay uga faa'iideystaan. Runtii waad ku mahadsan tahay El Salvador.
Waxaan ku xirayaa mashiinka ubuntu kan mid leh debian laakiin waxay i siisaa qalad aysan xaqiijin karin sidaas darteedna waxay i weydiineysaa erayga sirta ah .. maxay tani u dhici doontaa? Ma noqon kartaa in noocyada ssh-keygen ay ku kala duwan yihiin ama maxaa dhacaya?
Jawaab Jose Gregorio
Halkaan geli qaladka ay ku siinayso si aad si fiican kaaga caawin karto 😉
Sidoo kale, waxaad isku dayi kartaa inaad tan ku dhigto terminal:
Tani waxay samaynaysaa waa nadiifinta iskuxirka (taariikhda xiriirinta) SSH ee aad haysatay.
Oo hadaan rabo inaan u isticmaalo isla furaha guud ee dhowr server, miyaan sameyn karaa, mise waa inaan u sameeyaa fure furaha adeege kasta oo aan doonayo inaan galo? Waxaan iskudayayaa si kastaba ha noqotee, laakiin qaar ka mid ah server aan waxtar lahayn si aan u burburin wax faa'iido leh.
Sida aan ku sameeyay kumbuyuutarkeyga gacanta, waa fure u gaar ah server kasta, runtiina, waxaan u maleynayaa inaysan macquul aheyn in la isticmaalo isla fure dhowr ah ... maxaa yeelay aqoonsiga adeege kasta waa mid gaar ah, sida sawirka faraha 🙂
Waad salaaman tahay ciida ciideed. Waxaan aqrinayay furayaasha waxaanan ogaaday in labada fure (mid dowladeed iyo mid gaarba) ay u adeegaan macmiilka-macmiilka si uu isugu diro loona helo caqabado isla markaana uu midba midka kale u aqoonsado, marka wax xiriir ah lama laha erayga sirta ah ee aad ku gasho server, kan dambe ayaa loo isticmaalaa in lagu "dhejiyo" fure dadweynaha ee kuwa aaminka ah ee serverka. Marka waad u isticmaali kartaa inta aad rabto ama aad u baahan tahay.
Ma aqaano haddii aan sharraxay naftayda, laakiin kaftanka ayaa ah inaan awood u leeyahay inaad u adeegsato lammaanahaaga furaha ah server-yada kale, ka dib markaad raacdo barashadaada, waa inaad sameysaa:
ku qor lambarkaaga sirta ah adeeggan kale
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay hagaha, kan keliya ayaa i caawiyay. Hadda waxaan rabaa inaan ku sameeyo kumbuyuutar kale waxaan helayaa waxyaabaha soo socda:
$ ssh-koobi-id -p 4000 lm11@148.218.32.91
Dekedda xun 'umask 077; imtixaan -d ~ / .ssh || mkdir ~ / .ssh; bisad >> ~ / .ssh / dameerro idman '
Waad ku mahadsantahay kaalmadaada.
Waan sameeyay wixii aad noo sheegtay, laakiin way igu sii weydiineysaa furaha sirta ah. Waxaan cadeeynayaa xiriirkan aan sameynayo inta udhaxeysa laba Linux server hat hat ... Maxaa kale oo ay noqon kartaa
Waxaan durba eegay / etc / ssh / sshd_config
Waxaan horeyba u bilaabay labada server
PC2 = Linux koofiyad casaan 6.4
PC2 = Linux koofiyad casaan 5.1
Adeegga ssh waa in si sax ah loo qaabeeyaa (/ iwm / ssh / sshd_config faylka PC2) si ay u shaqeyso.
PC1 = Xarunta 6.4
PC2 = Koofiyad Cas 5.1
Waad salaaman tihiin asxaabteyda, waxaan ubaahanahay inaan dhiso xiriir aamin ah oo udhaxeeya 1 Linux Centos 5.3 server iyo Unix Sco5.7 laakiin waxaan dhib ku qabaa markaan sameynayo tilaabada 3 ee nuqulka furaha Linux ilaa Unix waxaan helaa fariinta / usr / bin / ssh-copy-id: Qalad: Aqoonsi lama helin, maxay u noqon kartaa?
Ku jawaab Grivas
Waxaan raacay casharrada tababarka talaabo talaabo ah. Wax khalad ah ima siinayo, laakiin dhamaadka markaan ka xiro PC1 ilaa PC2 way iga sii weydiineysaa furaha ereyga markasta oo aan xiriiro.
Ma jiraa qof ka fikiraya waxa ay noqon karto?
Waxay umuuqataa in kadib markaad soosaarto furaha waa inaad fulisaa ssh-add si wakiilka xaqiijintu u adeegsan karo.
corero andrea dijo
Markaan tirtiro furaha marinka, ma aqoonsana wax la iga jabsaday, caawimaad, waxba ma galiyo
Ku jawaab andrea colodro
Aad baad u mahadsan tahay, waxay u shaqeysay si qumman
Jawab Jordan Acosta
Aad baad ugu mahadsantahay hagaha! Waa wax aad u fudud oo waxtar u leh marka aad furanayso server-yadaada halkaas oo ay socdaan oo aadan u baahnayn inaad furaha furato oo aad sidaas wax otomatig uga dhigto 😀
Ma aanan ogeyn isticmaalka ssh-copy-id waana iska caadi.
Runtu waxay tahay inaan joogay illaa heer aan qoro erayga sirta ah, sidaa darteed waxa aan sameeyaa waa inaan ku keydiyo shaxdab DEFAULT ah, oo la ilaaliyo inta lagu jiro kalfadhiga.
Dhib malahan inaan qoro mar kasta oo aan kombuyuutarka furo, duubku waa inuu dhigaa mar kasta oo ay goyso ama waxyaalaha la midka ah 😀
SSH Maya Jutsu!
cashar wanaagsan ... laakiin hadaan rabo inaan xog gudbiyo ??? sideen u qaban karaa?
Ku jawaab lizz
Waad salaaman tahay, wax ku biirintu waa wax aad u xiiso badan, laakiin waxaan qabaa laba shaki oo ku saabsan mowduuc la mid ah
Ku jawaab diego gonzalez
Isku day tillaabooyinka kor ku xusan, laakiin markaad isku deyeyso inaad nuqul ka dhigto furaha server 2 (PC2) waxay ii sheegaysaa inuusan amarkaasi jirin.
bash: ssh-copy-id: amar lama helin
Miyaan koobiyeyn karaa furaha gacanta?
Wanaagsan !! Waxaan raadinayey sharaxaad taas fudud oo si fiican u shaqeysay
Tabaruc aad u fiican.
Aad baad u mahadsan tahay, wax badan ayeyna i caawisay.
Ku jawaab Yarumal
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jirto hab lagu sameeyo amarkan ssh-copy-id. Tan iyo markii aan rakibo Open ssh ee Windows, ssh aniga ayuu iigu shaqeeyaa DOS laakiin ma haysto amarkan ssh-copy-id. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo diro furahan furaha ah serverka kale ee Linux (Linux server). Aad baad u mahadsantahay.
Salaan Waxaan ubaahanahay inaan dhiso xiriir aamin ah oo u dhexeeya serverka Linux iyo mashiinka Windows. Ku rakib SSH-ka Windows-ka oo aniga ayey ii shaqeysaa. Laakiin amarkan ssh-copy-id laguma heli karo qalabkan.
Waxay yaqaanaan hab kale oo loo sameeyo iyadoon la isticmaalin ssh-copy-id.
Laakiin su'aasha tan ayaa ah inaan awood u leenahay inaan ku xirno lambar sir la'aan ah, haddii aan dhigno eray-bixin kooban wuxuu na weydiin doonaa baasaskaas inuu ku xirmo mana ahayn ujeeddada tan
Ku jawaab Andrinho
Aad ayey ii anfacday aniga moduleka fp-kayga, mahadsanid 🙂
Ku jawaab Vicent
Qaarkood waxay ka walwalaan sida ay u dhib badan tahay inay galaan lambarka sirta ah (passphrase), taasna, sida aan kor ku soo sheegnay, waa «user-Agent» iyo sidoo kale waxaan u habeeyay iyada oo leh Keepass iyo shaqadeeda Auto-Type, markaa aniga kaliya Waxaan ugu baaqayaa terminal-ka iyo isku-dhafka furayaasha ay iyagu diyaariyeen inay diyaar yihiin, sidoo kale waxaan leeyahay "aliases" codsi kasta wax walbana waa sahlan yihiin.
Philip Oyarce dijo
Faahfaahin aad u wanaagsan 🙂 laakiin waxaan qabaa su'aal ...
Waxaan haystaa PC10 oo ah halka aan ku haayo macluumaadka, macluumaadka waxaa laga soo diraa pc1 - pc2 - pc3, PC10, sidee baan uga dhigi karaa pc1, pc iyo pc3 inay isticmaalaan isla furaha si aan ugu helo PC10 fure la'aan.
Jawaab Felipe Oyarce
Sideen ugu taxan karaa waxa kujira mashiinka 1 bash bashshiish2 adigoon dhigin ssh ip @ martida basha mashiinka1. Ma aqaano haddii aan fahmay xD
10 sano ayaa ka soo wareegtay tan iyo daabicitaankan waana sii booqanayaa markasta oo aan u baahdo. Sida casharrada kale ee halkan ku yaal waxay u istaageen imtixaanka waqtiga. Mahadsanid iyo salaan!
Isbarbardhig feylasha ama tilmaamaha meld